Labada Ciyaartoy Ee Alexandre Lacazette Iyo Pierre Emerick Aubameyang Midkee Ayaa Ka Tagi Doona Kooxda Arsenal? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Dabcan weeraryahanada Arsenal ee Alexandre Lacazette iyo Pierre Emerick Aubameyang ayay muddooyinkii ugu dambeeyay labadoodaba shaki ku jiray mustaqbalkooda kooxda balse kooxdaas ayaa la sheegayaa inay mid kamida fasixistiisa diyaar u tahay.
Midka ay Gunners ka samrayaan ayaa lagu sifeeyay xiddiga reer France ee Lacazette iyaga oo diyaar u ah inay ganacsi ku sameeyaan oo ay kusoo bedeshaan garabka Atletico Madrid ee Thomas Lemar oo mudo dheer bar-tilmaameed u ahaa.
Arsenal ayaa mudo dheer doonaysay saxeexa Lemar oo 24 sano jir ah iyaga oo isku dayay inay lasoo wareegaan sanadkii 2018 markii uu ku sugnaa kooxda AS Monaco balse wakhtigaas ayuu doortay ku biirista Atletico.
Laakiin Lemar ayaa haatan hoos uga dhacay dookha tababare Diego Simeone isaga oo xilli ciyaareedkan kaliya 11 kulan ugu soo bilawday tartamada oo dhan.
Tababaraha ree Argentina qudhiisa ayaan waxba u qarin Lemar maadaama oo uu si cad u sheegay inuusan wixii laga filanayay markii uu heshiiska 70-ka Milyan ee euro ah kaga soo wareegay Monaco uusan muujin.
Sida uu haatan sheegayo wargeyska AS, Atletico Madrid ayaa doonayso inay iska fasaxdo Lemar isla markaana ka fikiraysa inay Arsenal ka ogolaato dalabkeeda oo ay ku bedelato Lacazette oo ay qudhoodu mudo ku daba jireen.
Lacazette oo wax weyn kusoo kordhin lahaa safka Atletico ayaa qaab wanaagsan ku bilawday noloshiisa Arsenal kaddib markii uu 36 gool kusoo dhaliyay labadiisii xilli ciyaareed ee ugu horreeyay laakiin tan iyo dhaawacii canqawga ee gaadhay bishii September ayuu qaab ciyaareedkiisii wacnaa waayay.
Ugu dambayn, arrinta furaha u noqon karya heshiis qabsooma ayaa ah in Lacazette uu doonayo inuu iskaga dhaqaajiyo Arsenal xilli ay laba sano ka hadheen heshiiskiisa Emirates Stadium isla markaana uusan u muuqan mid wax heshiis kordhin ah samaynaya.
Xidig Chelsea Leedahay Oo Ku Biiray Inter Milan